गायिका टिका सानु र कृष्ण कँडेलको सम्बन्ध विग्रियो ? टिका ले खोलिन सबै अचम्मित पार्ने भित्री रहस्य ! पूरा पढ्नुहोस । - News21Nepal
December 10, 2020 news21nepalLeaveaComment on गायिका टिका सानु र कृष्ण कँडेलको सम्बन्ध विग्रियो ? टिका ले खोलिन सबै अचम्मित पार्ने भित्री रहस्य ! पूरा पढ्नुहोस ।
काठमाडौ । गायीका टिका सानुले बोलेको एउटा पुरानो भिडियोको अंश भाइरल बनाउँदै इन्द्रेणी कार्यक्रम र त्यसका संचालकसंगको सम्बन्धलाई लिएर भएको टिप्पणी प्रति गायीका टिकाले स्पटिकरण दिएकी छन् । उनले कार्यक्रमका बारेमा बोलेका केही भिडियोको सानो अंश भाइरल बनाएर संचालक कृष्ण कँडेलसंग सम्बन्ध विग्रिएको टिप्पणी गरिएको छ । इन्द्रणी कार्यक्रममा सहभागी भएपछि थप चर्चित भएकी टिकाका बारेमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणी भएको छ ।
उक्त भिडियोमा मैले बोलेका केही राम्रा कुराहरु थिए। बिडम्बना ति कुराहरु सबै आएको पाएको छैन। जुन कुरा भाइरल भएका छन्, ति कुराहरु प्रचार गर्न लायक छैनन्। तर, त्यो भिडियोमा सोझो रुपमा कार्यक्रमका बारेमा परिचित थिएन भन्दा घमण्ड कसरी हुन्छ रु कुनै पनि संस्था र त्यसमाआवद्ध कर्मचारीहरु एकअर्कामा परिपुरक हुन्छन भन्दा के बिराए रु मैले इन्द्रेणीको कार्यक्रमका क्रममा शहरदेखि गाउँवस्तिका भिरपाखा धाएकी छु। २०औं जोर जुत्ता चप्पल फटाएकी छु। केही पाएकी छु, केही गुमाएकी छु। जुन प्रक्रिया चलिरहने प्रक्रिया पनि हो। स्रोत : गोर्खाली खबर
Tagged गायिका टिका सानु र कृष्ण कँडेलको सम्बन्ध विग्रियो ? टिका ले खोलिन सबै अचम्मित पार्ने भित्री रहस्य ! पूरा पढ्नुहोस ।
तपाइले सोचेको काम बन्नेछ , ॐ लेखि सक्दो सेयर गरौं! अन्यथा अनिस्ट हुने छ!!
दिउँसो केटा र राति केटी बनेर गर्थे यस्तो काम, थाहा पाएर उड्यो प्रहरीको होस्! आखिर के गर्थे त ? पूरा हेर्नुस।
युट्युब, फेसबुक तथा अनलाइन माध्यमबाट आम्दानी भएको रकम अब सिधैं आफ्नो बैंक खातामा
November 14, 2020 news21nepal